आईफोन स्क्रिन परिवर्तन गर्न कति खर्च हुन्छ? | आईफोन समाचार
आईफोन स्क्रिन परिवर्तन गर्न कति खर्च हुन्छ?
टच स्क्रिनको साथ कुनै पनि फोनका सबै प्रयोगकर्ताहरूले एउटा डर साझा गर्छन्: कि हाम्रो उपकरण भुइँमा खस्नेछ र हामी हेर्नेछौं कि यसको पर्दा कसरी हजार टुक्रा टुक्रा हुन्छ। यही कारणले गर्दा धेरैले कुनै पनि आईफोनमा टेम्पर्ड गिलास राख्दछन्, यद्यपि धेरै पटक आईफोन / / s एस र यसका गोलाकार किनारहरूमा पनि तिनीहरू उपकरणको डिजाइन थोरै कुरूप गर्दछन्। तर के हुन्छ यदि हाम्रो आईफोनसंग दुर्घटना भएको छ हामीले यसलाई सुरक्षित गर्नु अघि? खैर मात्र समाधान छ स्क्रिनलाई आईफोनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। तर हामी कहाँ परिवर्तन गर्छौं? कति? के हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं?
यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर छ। खराब कुरा यो हो कि यी उत्तरहरू धेरै स्पष्ट छैनन्, जस्तै स्क्रिनको मूल्य। कुलमा र यदि मैले कुनै पनि छोड्ने छैन भने, त्यहाँ १२ वटा आईफोन मोडेलहरू छन्, २ जी गणना गर्दै जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र बिक्री भयो र दुई प्रति मोडल आईफोन 12 एस-from सीबाट। यदि हामी केवल स्क्रीन मात्र खरीद गर्ने निर्णय गर्छौं भने, मूल्य विक्रेता र आईफोन मोडेलमा फरक हुनेछ। जे भए पनि, तल तपाईंसँग छ आईफोन स्क्रिनको अनुमानित मूल्यहरू।
1 आईफोन स्क्रिनको कति खर्च हुन्छ?
1.1 आईफोन 3G जी स्क्रिन मूल्य
1.2 आईफोन S जीएस स्क्रिन मूल्य
1.3 आईफोन screen स्क्रीन मूल्य
1.4 आईफोन S एस स्क्रीन मूल्य
1.5 आईफोन -5-c सी स्क्रीन मूल्य
1.6 आईफोन s एस स्क्रिन मूल्य
1.7 आईफोन screen स्क्रीन मूल्य
1.8 आईफोन Plus प्लस स्क्रीन मूल्य
1.9 आईफोन s एस स्क्रिन मूल्य
1.10 आईफोन s एस प्लस स्क्रीन मूल्य
2 मँ आईफोन स्क्रिन कहाँ परिवर्तन गर्न सक्छु?
2.1 एप्पल स्टोर
2.2 पुनर्विक्रेताहरू र अधिकृत वितरकहरू
2.3 तेस्रो-पार्टी SAT
आईफोन स्क्रिनको कति खर्च हुन्छ?
तार्किक, मूल्य यो आईफोनमा निर्भर गर्दछ। आईफोन 3.5G जी The.। इन्चको स्क्रीन आईफोन s एस प्लसको .3..5.5 इन्च स्क्रीन जस्तै होईन। र यो त्यो होईन, आकार एकातिर, तिनीहरू यति फरक छन्। सबैमा जस्तै, स्क्रिनहरू बेच्नेहरूले प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताको बढी फाइदा लिन्छन् जसले आफ्ना नयाँ आईफोनको स्क्रिन भ broken्ग गरेका छन्। यदि हामीसँग आईफोन 6G जी छ र स्क्रिन ब्रेक छ भने, यो सम्भावना छ कि हामीले मोबाइल नवीकरण गर्ने बारे विचार ग and्यौं र यो नै मुख्य कारण हो जुन हामीले कम मूल्यमा पुरानो उपकरणहरूको लागि स्क्रीनहरू फेला पार्न सक्दछौं।
दिमागमा राख्नुहोस् कि हामी सबै अनलाइन फेला पार्न सक्छौं। तर यदि तपाइँ खोजी गर्नुहुन्छ, तपाइँ प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि आईफोन स्क्रीन मूल्यहरू कम वा कम निम्न छन्।
आईफोन 3G जी स्क्रिन मूल्य
आईफोन 3G जी विश्वव्यापी रूपमा खरिद गरिएको पहिलो हो। तपाईंलाई थाहा छ, यससँग 3.5.-इन्चको स्क्रीन छ र २०० 2008 मा बिक्रीमा राखिएको थियो। यदि तपाईंले खोजी गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो स्क्रिनको मूल्य देख्न सक्नुहुनेछ € १-14-२23 बीचमा.
आईफोन S जीएस स्क्रिन मूल्य
आईफोन 3G जी एस एक डिजाइन चक्र पूरा गर्न पहिलो थियो र पत्र "S" समावेश गर्दछ जुन आजसम्म दोस्रो मोडेलहरूको साथ आएको छ। हामी आईफोन as जी जस्तै समान न्यूनतम मूल्यको लागि स्क्रीनहरू फेला पार्न सक्छौं, तर अधिकतम मूल्य थोरै बढी बढ्छ र रहन्छ € १-14-२30 बीचमा.
आईफोन screen स्क्रीन मूल्य
आईफोन पहिलो आईफोन थियो जसले वास्तवमै मेरो आँखा समात्यो। यसले फ्ल्यासको साथ already एमपी क्यामेरा समावेश गर्यो जुन मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। कुनै चीजको लागि होइन यो वर्षको फोन नाम थियो। यसको स्क्रिनको अधिकतम मूल्य आईफोन S जीएससँग मिल्दोजुल्दो छ, तर रहनको लागि न्यूनतम बढि अलि बढ्छ € १-17-२30 बीचमा.
आईफोन S एस स्क्रीन मूल्य
आईफोन S एस दोस्रो र प्रख्यात "एस" लाई समावेश गर्ने थियो र सिरीसँग कुरा गर्न सक्षम हुने पहिलो थिए। थप रूपमा, आन्तरिक कम्पोनेन्टहरूले यसलाई एक पुरानो रोकर बनाउँछ जुन आज झगडा गर्न जारी रहन्छ, क्यामेराको उल्लेख नगर्न जुन MP एमपीमा बढेको छ। यसको स्क्रिनको मूल्य व्यावहारिक रूपमा आईफोन of को जस्तै छ, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई भेट्न सक्दछौं € १-17-२30 बीचमा.
आईफोन -5-c सी स्क्रीन मूल्य
आईफोन 5. to देखि inches इन्च सम्म जान पहिलो थियो। यसमा आइफोनको आईफोनको धेरै उत्तम डिजाइनका लागि के समावेश छ र विश्वको सबैभन्दा पातलो स्मार्टफोनको रूपमा घोषणा गरिएको थियो, यद्यपि यो पूर्ण रूपमा सत्य थिएन। हामी तपाईंको स्क्रीनहरू मूल्यमा पाउन सक्छौं € 40-45 बीचमा.
आईफोन s एस स्क्रिन मूल्य
आईफोन s एस history 5-बिट प्रोसेसर प्रयोग गर्ने इतिहासको पहिलो फोन हो, र साथमा समस्याहरू बिना काम गर्ने फिंगरप्रिन्ट सेन्सर प्रयोग गर्ने पहिलो थियो। यसले आईफोन of को डिजाईन साझेदारी गर्दछ, तर यो नयाँ र colors्गमा आउँदछ, जस्तै स्पेस ग्रे वा सबैभन्दा उल्लेखनीय गोल्ड। हामी तपाईंको स्क्रीनहरू मूल्यमा पाउन सक्छौं € 42-55 बीचमा.
आईफोन मा चिन्ह लगाउने पहिलो थियो। यो to देखि6इन्च भयो र एनएफसी चिप समावेश भयो जुन तपाईंलाई एप्पल पेको साथ मोबाइल भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको स्क्रिनको मूल्य प्राय: around 50 को आसपास, तर अनलाइन तपाईं € १२० को लागि केहि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यससँग सावधान रहनुहोस्, आवश्यक भन्दा बढी खर्च नगर्नुहोस्।
आईफोन Plus प्लस स्क्रीन मूल्य
आईफोन Plus प्लस आईफोन of को आकारको हिसाबले जेठो भाई थियो। आईफोन does मा गर्नुहुने सबै कुराको थपमा यससँग ठूलो 6..6 इन्च स्क्रीन छ र यसको भिडियो क्यामेरामा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर (OIS) छ। आईफोन than भन्दा ठुलो स्क्रीन भएकोले हामी अझ महँगो पर्दा फेला पार्न सक्दछौं, तर यसको आईफोन as को जस्तै मूल्य छ, जुन यसलाई छोडिन्छ। € 50 र € १२० बीचमा.
आईफोन s एस पहिलो आईफोन थियो जुन २ जीबीको र्याममा गयो र थ्रीडी टच स्क्रिन राख्यो। आईफोन Like जस्तै यससँग6इन्चको स्क्रीन छ र यसको मूल्य व्यावहारिक रूपमा उस्तै हो, जुन लगभग छ 50-120 €.
आईफोन s एस प्लस स्क्रीन मूल्य
आईफोन s एस प्लस सुरूवात गर्न पछिल्लो मोडेलको सबैभन्दा ठूलो संस्करण हो। यो आईफोन s एस जस्तै छ, स्क्रीन आकार र OIS को फरक संग। सबै "models मोडेल" को मूल्य एकै छ, त्यसैले आईफोन s एस स्क्रिन € 50-120 बीचमा.
माथिका मूल्यहरूको बारेमा दिमागमा राख्नुपर्ने केहि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो केवल स्क्रीन खरीदको लागत। यदि तपाईं यसलाई किनेको निर्णय गर्नुहुन्छ र यसलाई स्थापनामा लगिन थाल्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा तिनीहरूले तपाईंलाई एक श्रम चार्ज गर्नेछन् जुन कुनै पनि केसमा लगभग € २० कम हुनेछैन (हो, आईफोनमा सबै कुरा महँगो छ)।
आईफोन / / s एसको एप्पलमा लगेर यसको स्क्रिन मर्मत गर्न कुल मूल्य हो लगभग € २, तर यो लगभग 109 मा रहन्छ यदि हामीसंग छ भने एप्पल केयर। तार्किक रूपमा, तपाईंले अनलाइन फेला पार्नुहुने स्क्रिनको जतिसुकै फरक पर्दैन, यसको एप्पलले गरेको मर्मतभन्दा उच्च मूल्य कहिले पनि हुँदैन, तर इन्टरनेटमा हामी सबैलाई राम्रा र नराम्रो दुवैका लागि फेला पार्न सक्दछौं।
मँ आईफोन स्क्रिन कहाँ परिवर्तन गर्न सक्छु?
तार्किक रूपमा, जहाँ हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछौं उनलाई एप्पल स्टोरमा लगेर। यो स्पष्ट छ कि यो सब भन्दा महँगो हो, तर यो सुरक्षित बाजी पनि हो। यदि एप्पल टेक्नीशियनले कुनै गल्ती गर्छ भने, हामी निश्चय गर्न सक्छौं कि नयाँ मर्मतको ख्याल राख्नुहुनेछ। उनीहरूले हामीलाई नयाँ आईफोन प्रदान गर्ने सम्भावना पनि छ। थप रूपमा, त्रुटि as 53 जस्ता केसहरूले देखाउँदछ कि यो जुवा खेल्न लायकको छैन जुन उपकरणहरूसँग हामीलाई € १,००० जति खर्च भयो। स्क्रीन परिवर्तन गरेर हामी एक आन्तरिक घटक बिगार्न सक्छौं र, उदाहरण को लागी, टच आईडी काम रोक्न सक्छ। संक्षेप मा, यदि पैसा एक मुद्दा छैन, एप्पल सबै भन्दा राम्रो यसको देखभाल छ।
पुनर्विक्रेताहरू र अधिकृत वितरकहरू
दोस्रो विकल्प हो अधिकृत प्रतिष्ठानहरू। यी प्रतिष्ठानहरू ती हुन् जुन एप्पलले न्यूनतम गुणस्तर पूरा गर्न मद्दत गर्दछ र मर्मतको ख्याल राख्न सक्दछ। यी प्रतिष्ठानहरूले एप्पल जस्ता शुल्क लिन सक्छन्, तर त्यहाँ तिनीहरूले हामीलाई थोरै कम चार्ज गर्ने सम्भावना पनि छ। निस्सन्देह, यदि समस्या देखा पर्‍यो र यो सब भन्दा सामान्य छैन भने पनि, तिनीहरूले पनि हामी माथि केही समस्या ल्याउन सक्छन् र त्यो एक उपद्रव हुन सक्छ।
तेस्रो विकल्प यो लिनु होaमा स्थापना सेवा प्रदान गर्दै। यो हाम्रो शहरको कार्यशाला जस्तै हो, एउटा मात्र जसले ट्रकको ईन्जिन फिक्स गर्दछ जुन हाम्रो बाइकको पा wheel्ग्रामा एउटा प्याच राख्छ। पेशेवरहरू कि तिनीहरू हुन्, तिनीहरू काम गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छन् र सामान्यतया तिनीहरूले प्राय: धेरै शुल्क लिदैनन्, तर हामी होशियार हुनै पर्छ किनकि हामी जसले हामीलाई चन्द्रमा दिने वाचा भेट्छौं भेट्न सक्दछौं न त राम्रो काम गर्छ न प्रतिक्रिया गर्दछ। काम खराब गरीयो। यो वास्तवमा चिठ्ठा जत्तिकै छ: ​​तपाईंले यो खेल्नु पर्छ र हामी अझै धेरै जित्न सक्छौं, तर हामी हराउन पनि सक्छौं। यो ती प्रयोगकर्ता हुन् जसले शर्त लिने कि यसलाई पास गर्ने निर्णय गर्दछन्।
अन्तमा, हामीसँग सधै यो विकल्पको विकल्प हुन्छ हामी आफैं। यो स्पष्ट छ कि कसैले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर यो handymen को लागि सम्भव छ। यदि त्यो तपाइँको केस हो भने, तपाईले गर्न सक्ने उत्तम भनेको अनलाइन स्क्रिनको लागि हेर्नु हो (अमेजनमा सामान्यतया राम्रो प्रस्तावहरू हुन्छन्) र, यदि सम्भव छ भने आवश्यक उपकरणहरू समावेश गर्दछौं, तब हामी यसबाट हिंड्नेछौं। आईफोन मर्मत सेक्सन de iFixit र हामी ती पत्र ट्यूटोरियलको अनुसरण गर्छौं जुन उनीहरूले आईफोनमा स्क्रिन परिवर्तन गर्न प्रकाशित गरेका छन्।
तार्किक रूपमा, यदि हामी iFixit गाइडमा हेरेर आफैं स्क्रिन परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्छौं भने, हामीले यसमा हेर्नुपर्नेछ हाम्रो आईफोनका लागि निर्दिष्ट मार्गनिर्देशन। यद्यपि, उदाहरणका लागि, आईफोन the S को समान हुनुपर्दछ, एउटा मोडेलसँग सधै हार्डवेयर हुन सक्छ जुन अर्को मोडलमा हुँदैन, आईफोन S एसमा अतिरिक्त माइक्रोफोनको कारणले सिरीले हामीलाई बुझ्ने अनुमति दिन्छ।
के तपाईको आईफोन स्क्रिन बिग्रिएको छ र तपाईले यसको मर्मत गर्नुभयो? हामीलाई आफ्नो अनुभव बताउन नहिचकिचाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईफोन स्क्रिन परिवर्तन गर्न कति खर्च हुन्छ?
यो एकदम सहि छैन। आईफोन highly अत्यधिक मर्मत योग्य छ। मेरो केसमा स्क्रिन भाँचेको थियो र मैले यसलाई € ११ for का लागि एप्पलमा परिवर्तन गरें। वास्तवमा, यसलाई सेबको बाहिर परिवर्तन गर्नु राम्रो हुँदैन।
Pecks लाई जवाफ दिनुहोस्
ठ्याक्कै। स्पेनमा मैले यसलाई Apple ११ for मा एप्पलमा परिवर्तन गरें।
साथै, यदि तपाईंले यसलाई एप्पल बाहिर परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईंले न केवल वारेन्टी गुमाउनुहुनेछ, तर तपाईं सबै आधिकारिक समर्थन हराउनुहुनेछ। म स्टोरमा निम्न स्थितिका बीचमा आएँ: एउटी केटी एप्पल स्टोरमा थिए किनभने उनको आईफोन सुरु हुँदैन। टेक्नीशियनले मोबाइल देख्ने बित्तिकै उनले महसुस गरे कि स्क्रिन आधिकारिक थिएन र यो त्यहाँ मर्मत गरिएको छैन। उसले केटीलाई सोध्यो र उनले पक्का गर्‍यो, उसले स्क्रिन मर्मत गरेको थियो यस भन्दा पहिले नै। प्राविधिकले उनलाई भने कि उनले आधिकारिक समर्थन गुमाइसकेका छन र उनीहरूले कुनै मर्मत गर्दैनन्, यदि उनी चाहन्छ भने उसले नयाँ आईफोन किन्न सक्छु।
सर्जियो एन्टोन भन्यो
२०१ Apple को रूपमा एप्पलमा यो € १ than० भन्दा बढीको लागि हो र उनीहरूले अपोइन्टमेन्ट गर्न धेरै समय लिन्छन्। तिनीहरूले सामान्यतया तपाईंलाई थोरै चार्ज गर्छन् र तपाईंलाई नविकरण दिन्छन् जुन लामो अवधिमा धेरै ढिलो छ र जुन ग्यारेन्टीले कभर गरेको छैन:
म्याड्रिडमा आईफोन मर्मत गर्न सबै भन्दा राम्रो तबली हो, तिनीहरू यो तपाईंको अगाडि र just० मिनेटमा गर्छन्। तिनीहरूले मूल टुक्राहरू राखे र उत्तम कुरा यो हो कि तपाईं स्टोरमा लाम बचत गर्नुहोस् किनभने तिनीहरू सिधा तपाईंको घरमा जान्छन्। 30th औं लागि तिनीहरूले मलाई बढी वा कम € ११० शुल्क लिने छन्, र तिनीहरूले २ वर्षको लागि मर्मतको ग्यारेन्टी गर्दछन्। एप्पल जस्तो छैन यो पूर्ण रूपमा आफ्नो हात धुन्छ।
सर्जियो एन्टोनलाई जवाफ दिनुहोस्
हेरौं, पोष्ट मेरो लागि सूचक देखिन्छ, तर यो केही छोटो भयो। मैले एप्पलकेयरका फाइदाहरू र तेस्रो-पक्ष भागहरूका बेफाइदाहरूबारे कुरा गर्नै पर्छ, त्यसपछि पानी, गलत रंग तापमान र अन्य असफलताहरू देखा पर्दछन्।
यो सत्य पनि हो कि एक पटक वारेन्टीमा उनीहरूले अधिक रातो पर्दा राखे, मैले गुनासो गरे र तिनीहरूले अर्को पनि राखे जुन अझ राम्रो देखिन्थ्यो।
यो सत्य होइन कि जब आईफोनमा हार्डवेयर परिवर्तन गर्दा यसलाई लक हुन्छ? वा यो केवल होम बटनको परिवर्तनसँगै हो?
मैले आईपल of को स्क्रिन एक एप्पल स्टोरमा परिवर्तन गरें किनकि यसले कुनाको चारैतिर भाँचेको छ (यसको संरक्षक थियो), तिनीहरूले यसलाई ११० यूरोमा परिवर्तन गरे, र मैले भन्नु पर्छ कि यो अब भत्केको छैन र मैले नयाँ ल्याएको छु। एक संरक्षक बिना पर्दा, तर यसले केहि दु: ख दिन्छ केहि दिन पछि मैले बुझे कि पर्दा गलत तरिकाले फिट गरिएको थियो, यदि तपाईले तल्लो कुनामा थिच्नुभयो भने पर्दा केस झुकाइएको जस्तो छ कि सर्न सक्छ, र यो जस्तो छ, मलाई थाहा छैन उनीहरूले आईफोन fix लाई ठीक गर्न प्रयोग गर्ने बललाई थाहा छैन, तर ध्यानमा राख्दै कि उनीहरूले बेन्डगेटको साथ चिन्ता लिए कि उनीहरूले पहिले नै बढी हेरचाह गर्न सक्थे किनकि तिनीहरूले मेरो आईफोन छोडिदिएका छन् यद्यपि यो ना the्गो नदेखिने भए पनि आँखा
मेरो आईफोन ((प्लस होईन) अलि अलि झेलियो र स्क्रिन क्र्याक भयो जब केटाले भनेका छन्, ती चीजहरूसँग सानो मजाक गर्नुहोस्, अब मसँग s एस प्लस छ र यसले बाnd्ग वा मजाक गर्दैन।
बधाई छ र यसको साथ शुभकामना, म दावी गर्छु।
जोस मारी भन्यो
मलाई भन्नुहोस् कि तपाई तिनीहरूलाई यति सस्तो कहाँ पाउँनुहुन्छ
ग्यारेन्टी वर्ष भन्दा बाहिर मेरो plus प्लसको स्क्रिन प्रतिस्थापनको लागि उसले मलाई सेबको सम्पर्कमा राख्यो र उनीहरूले € 6१ मा मागे
जोस मारीलाई जवाफ दिनुहोस्
उनले स्पेनमा मलाई दुई तरिका प्रस्ताव गरे:
- अपोइन्टमेन्टको लागि सोधेर एप्पल स्टोरमा जानुहोस्। एक आईफोन The को स्क्रिन मर्मत लगभग € ११€ हो र दुई घण्टा लाग्छ। वारेन्टीले स्क्रीन ब्रेकेज कभर गर्दैन। स्पेनमा एप्पल केयर मलाई लाग्दैन।
- पोष्टबाट आईफोन पठाउनुहोस्। उनीहरूले तपाईलाई कार्डमा नयाँ आईफोनको मूल्य चार्ज गर्दछ र अर्को दिन तपाईलाई नयाँ आईफोन पठाउँछन्। तिनीहरूले तपाइँलाई राख्छन् र एक पटक क्षतिहरूको आकलन भएपछि, तिनीहरूले तपाइँलाई पैसाको केही अंश फिर्ता दिन्छन्। प्रक्रियाको अन्त्यमा तपाईंले भुक्तान गर्नुभएको पैसा मर्मतको मूल्य हो, जुन एक फोनको क्षति निर्धारण गरेपछि प्राईमा गर्न सकिदैन किनभने उनीहरूले तपाईंको फोन प्राप्त गरे पछि।
टाबिलिमा तिनीहरू यसलाई € ११० को लागि गर्छन्। मलाई विश्वास छ यो म्याड्रिडमा आईफोन मर्मत गर्न सबैभन्दा भरपर्दो साइटहरू मध्ये एक हो। उनीहरूले तपाईलाई २ बर्षे ग्यारेन्टी दिन्छन् र तपाई जहाँसुकै तपाईको मोबाइल मर्मत गर्न चाहानुहुन्छ। मेरो केसमा उनीहरूले छोडेनन् मेरो मोबाइल १००% हुँदा सम्म म चाहान्थे
यस पोष्टमा कति त्रुटि तपाईंले केहि लेख्नु अघि त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि तपाईं एप्पल वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने तपाईले मूल्यहरु देख्नुहुनेछ र ती तपाईसंग जे भन्छन् त्यसमा मेल खाँदैनन्, ती सस्ता छन्। अर्को कुरा केहि पर्दा बाहेक केस टुटेको वा डन्टेट गरिएको छ, त्यो अवस्थामा मूल्य एकदम परिवर्तन हुन्छ।
तेस्रो-पार्टी कार्यशालाहरू तपाईले भन्नुभए जस्तै सस्तो छैन। तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा सेपको रूपमा समान शुल्क लिन्छन्, केहि बढि।
र अर्को तर्फ, यदि स्क्रिनले एप्पल सिट परिवर्तन गर्दछ भने, ग्यारेन्टी तपाईं पहिले नै हराउनुभएको छ। फोनले प्राप्त गरेको आघातका कारण, एप्पलले वारेन्टी रद्द गर्दछ
S एस प्लस स्क्रिनको मूल्य6१ .175 छ यदि यो वारेन्टी अन्तर्गत छ भने, मूल्य आधिकारिक वेबसाइटमा छन्।
अब, तिनीहरूले मसँग € 351१ शुल्क लिएका छ र एक मर्मत गरिएको छ जुन अवस्थित छैन भन्ने समस्याको आविष्कार गर्दै। एप्पल SAT को साथ धेरै सावधान रहनुहोस्
बिलीजोलाई जवाफ दिनुहोस्
अर्नेस्टो ए भन्यो
एप्पलमा म्याड्रिडमा मेरो आईफोन s एस प्लस मर्मत गर्दा उनीहरूले मलाई @ बिलीजोई जस्तो केही गरे। मैले नविकरणका लागि € 6१381 तिर्नु समाप्त गर्यो (यो स्पष्ट छ कि मूल्य एक बर्षको लागि बढेको छ) र म धेरै दुखी थिए। साधारणतया तिनीहरू तपाईलाई सुन्न कोसिस गर्दछन् कुनै पनि हालतमा तपाईले त्यसलाई तिर्ने लामो समय सम्म परिष्कृत हुनुहुन्छ।
वास्तवमै एप्पल SAT बाट अलग रहनुहोस्।
अर्नेस्टो ए लाई जवाफ दिनुहोस्
के कसैलाई थाहा छ मलाई आईफोन fix लाई ठीक गर्न कति खर्च हुन सक्छ?
मैले यसलाई तबलीमाb75 पैसामा मर्मत गरे। तिनीहरू जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ र यो २० मिनेट जति लाग्यो।
नयाँ आईफोन एसई र आईप्याड प्रो वालपेपर कसरी डाउनलोड गर्ने
हेरौं कि तिनीहरूले कुञ्जीमा हिट गरे कि भए: एप्पलले आईओएस .9.3 ..XNUMX को नयाँ संस्करण सुरू गर्‍यो सक्रियता विफलता समाधान गर्न